Sakai အဖြစ်အပျက်!! (ပြင်သစ်လူမျိုးကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့တဲ့ ဆာမူရိုင်းရဲ့ပြင်ဆင်မှု) - JAPO Japanese News
လာ 08 Nov 2021, 15:11 ညနေ
ဆာမူရိုင်းဟာ သန်မာသလား? အားနည်းသလား?
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သေနတ်ကိုအဓိကထားလာတဲ့အချိန်၊ ဂျပန်မှာတော့ ဓါးကိုသာအသုံးပြုနေသေးတဲ့ ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတွေကို အထင်သေးလှောင်ပြောင်ကြတဲ့လူတွေ များစွာရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲကတစ်ချို့ဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ကြောက်ရွံ့သွားစေခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းခေတ်ကနေ ခေတ်သစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်လာတဲ့ ၁၈၆၈ ခုနှစ်။
ဆိုဆာကာမှာ စောင့်ကြပ်နေကြတဲ့ ဆာမူရိုင်းများနဲ့ ဆန္ဒရှိသမျှမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကြားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုကတော့ Sakai အဖြစ်အပျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ မိမိတို့သဘောဖြင့်သင်္ဘောဆိုက်ကပ်ပြီး၊ ဆင်းလာခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးတွေဟာ စိတ်ကြိုက်သောင်းကျန်ပါတယ်။
အရက်သောက်ပြီး အော်ဟစ်ကာပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီး၊ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကို လိုက်ဖမ်းဆီးတာမျိုး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲတွေလိုမျိုးပဲ လုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေဟာ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့စကားပြန်မပြောနိုင်ပေမဲ့၊ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် သင်္ဘောကိုပြန်ထွက်ခွာဖို့ ညှိနှိုင်းပေမဲ့ ပြင်သစ်တွေဟာလုံးဝနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။
ဆာမူရိုင်းတွေကို “ Yellow monkey” ဆိုပြီး ပါးစပ်ကနေရေရွတ်နေရင်း လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတွေကတော့ ငါတို့ကိုလာမတိုက်နိုင်ပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး လေချွန်ကာကပြရင်းနဲ့ လှောင်ရယ်မောခဲ့ကြတယ်။ …
သူတို့တွေဟာ Shikoku ဧရိယာရဲ့ Tosa Domain အရပ်ကနေလာခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့အမှုကတော့ မျိုးနွယ်စုအလံကို ပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ယောက်က စနောက်ပြီးလုပြေးသွားပါတယ်။
မျိုးနွယ်စုသားဖြစ်တဲ့သူတို့တွေဟာ တန်ဖိုးတဲ့အမှတ်အသားကို လှောင်ပြောင်ပြီးအလုခံရတာကို သည်းမခံနိုင်ဘဲ၊ ဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်၊ မောင်းပြန်သေနတ်ကိုကိုင်ဆောင်ပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်ခက်မှုမှာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ကာ၊ ပြင်သစ်လူတွေကို ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
Sakai အဖြစ်အပျက်ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းမှုဟာ ဒီနေရာကနေအစပြုခဲ့တယ်။
ပြင်သစ်အစိုးရဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ဂျပန်ဘက်မှာတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
・ဂျပန်အစိုးရ၊ Tosa domain ကိုယ်စားလှယ်က တောင်းပန်ရန်
・ဒေါ်လာ ၁ သိန်းခွဲ လျော်ကြေးပေးရန်
ဂျပန်ဟာ အခုကစပြီးနိုင်ငံတော်သစ်ဆီခြေလှမ်းဖို့စတင်နေတုန်းမှာပဲ၊ ပြင်သစ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဒီအပြင်တိုက်ခိုက်လို့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက်၊ အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကို သည်းခံပြီး လိုက်လျောလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေကို ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ပြင်သစ်တွေကပဲ အမှားကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဂျပန်ဟာလက်ရှိ တောင့်တင်းတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလပဲ။
တိုင်းတပါးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တာကြောင့်၊ စိတ်တော့မကောင်းပေမဲ့ ဂျပန်အတွက်အသက်စွန့်ပေးစေချင်တယ်။”
ဒါကိုသေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ အကျဥ◌်းသားအယောက် ၂၀ လုံးဟာ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ အပြစ်သားကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးသေဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်ရှိပေမဲ့၊ ဆာမူရိုင်းအတွက်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Seppuku ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်။
သံအမတ်ဟာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်မှာပဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီ Seppuku ကသံအမတ်ကို အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
သေဒဏ်ပေးခံရသူတွေထဲက တစ်ယောက်သောသူက သံအမတ်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
“ ကျေနပ်ပြီလား၊ ကျုပ်တို့သေဆုံးခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံအတွက်ပဲ။ ဒါဟာဆာမူရိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပဲ။ သေသေချာချာကြည့်ထားလိုက်ပါ”
သူဟာဘာမှမပြောဘဲ၊ မျက်နာအမူအရာပြပြီး၊ သံအမတ်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ကာ ပြုံးပြရင်း Seppuku လုပ်သွားပါတယ်။
ဒီလိုတစ်ယောက်ချင်းစီ Seppuku လုပ်သွားရင်း၊ ၁၀ ယောက်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ သံအမတ်ထံကနေ စကားတစ်ခွန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
“ ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ Seppuku မလုပ်ကြနဲ့တော့” ဆိုပြီးထိုင်ခုံကနေ မတ်တပ်ရပ်ကာပြောခဲ့ပါတယ်။
သတ်သေမရှိဘူးဆိုရင် Seppuku ကအထမမြောက်ဘူး။ ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်း အဆုံးထိကြည့်ပါလို့ ဂျပန်ဘက်ကခိုင်မာစွာဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သံအမတ်ဟာသည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ၊ ကျန်နေသေးတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်စေချင်လို့ ဆိုပြီးပြောကာ၊ သင်္ဘောနဲ့ပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
သေရမယ့်ဘေးမှကယ်တင်ခံလိုက်ရလို့ တော်ပါသေးတယ် ဆိုပြီးမကျေနပ်နိုင်တာက ဆာမူရိုင်းရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ထားပြီး အသက်ကိုကယ်တင်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျန် ၁၀ ယောက်ဟာ ဒီအရာအပေါ်မကျေနပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
တစ်ဖွဲ့တည်းအတူတူလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အပေါင်းအဖော်ကတော့ တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့ပေမဲ့၊ မိမိတို့ကပဲ အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့တာက သူရဲဘောကြောင်ခြင်းပဲလို့ တွေးခဲ့ပါတယ်။
Seppuku ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီး ပြင်သစ်ဘက်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး ဒီသတင်းဟာ ဥရောပတစ်ခွင်အထိပါပြန့်နှံ့သွားပြီး၊ ဆာမူရိုင်တွေက တကယ့်အရူးပဲ လို့မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Seppuku ကို ကျူးလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်အပေါ် အပြစ်ဖြေခြင်းလို့စဥ◌်းစားလိုက်ရင် ဒါကိုနားမလည်တော့ပါဘူး။
Seppuku ဆိုတာ ဆာမူရိုင်းတွေအတွက်သာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ တာဝန်ယူမှုပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ပါဘူး။
ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီး ဖမ်းမိသွားတဲ့အခါ၊ ဆာမူရိုင်းဖြစ်ပါစေ seppuku ကို လုပ်ခွင့်မပြုဘဲခေါင်းဖြတ်သတ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ပြီး မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမှုအပေါ် တာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့သာ seppuku ကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်တဲ့အရာအတွက် ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် သေဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။
ဒါဟာဆာမူရိုင်းရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အတွေးဖြစ်ပြီး၊ လှပစွာနဲ့ပွင့်ရင်း လေထဲမှာလွှင့်ပျံကာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ဆာကူရာပန်းလို သူတို့ဘဝရဲ့လှပမှုကို လောင်းကြေးထပ်ထားတာကြောင့်၊ ဂျပန်လူမျိုးဟာ ဆာကူပန်းကိုအင်မတန်ကြိုက်ကြတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
အိုကီနာဝါတွင် သန္တာကျောက်ခက်များအား ပြန်လည်မွေးမြူခြင်း။ သန္တာကျောက်တန်းရဲ့ အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးပါ။